फर्न कोठा: घर मा हेरविचार। फर्न Nephrolepis: बढ्दै
एक पृथ्वीमा सबैभन्दा रहस्यमय बिरुवाहरु को - एक फर्न। त्यहाँ वर्ष लाखौं यस प्रकारको छ। इवान Kupala को रात मा, धेरै यो बोट को फूल जंगल जान पाउन चाहने, तर कुनै एक अझै सम्म फेला छ। सबैलाई केही मात्र वन को एक निवासी, र केही हरियो कोठा मा यो सुन्दर एकदम सहज भावना तिनलाई थाहा छ, फर्न परिचित छ। तपाईं फर्न मा बसोबास गर्न चाहनुहुन्छ कोठा? घर मा हेरविचार उहाँलाई लागि कठिन छैन। तपाईं मात्र मृत्यु आफ्नो हरियो पाल्तु जनावर ल्याउन छैन, यो नियम केही थाह गर्न आवश्यक छ। इन्डोर फर्न फूल प्रेमीहरूको बीच सबै भन्दा साधारण Nephrolepis। संतृप्त हरियो आफ्नो पात को, त्यो कोठा coziness दिन्छ।
फर्न कोठा: घर मा हेरविचार
को फर्न बीच Nephrolepis को कोठा मा खेती को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो, त्यसैले यो हार्डी प्रजाति सबैभन्दा प्रतिनिधि हो। Nephrolepis - प्रकाश र अँध्यारो रंग को धनी हरियो रंग को पात धेरै सुन्दर Ornamental बोट। पात रङ लगाउन एक गमला मा प्रकाश र जमीनमा पूर्ण निर्भर छ।
कसरी उथला फर्न हेरचाह गर्न? मुख्य कुरा - भर्न छैन र बोट overfeed छैन। साथै, त्यहाँ केही विशेष सुविधाहरू छन्: यो फर्न जस्तै भनेर थाह आवश्यक छ, र जो देखि उहाँले चोट र अप सुक्खामा सुरु हुन्छ। साधारणतया कुनै जटिलताहरू, बस यस लेखमा उल्लेखित नियमहरूलाई पालना गर्न आवश्यक छ। फलस्वरूप, तपाईं बिरुवाहरु को हरियो पात एक ठूलो लक्जरी प्राप्त।
उथला फूल। फर्न: हेरविचार र हावा वातावरण
फर्न मानिन्छ बिरुवाहरु unpretentious छन्, तर अझै पनि उनि आफ्नो हरियो सौन्दर्य आँखा प्रसन्न पार्न छैन जो बिना केही अवस्था, छन्। उदाहरणको लागि, वन समकक्षों आफ्नो: जंगली फर्न नियमित पानी, कुनै छिडकाव र मान्यता पनि गर्न र सही समयमा अनुसार लागू कुनै मल बिना फस्टाउँछन् मा। एकै समयमा, आफ्नो नातेदार कोठा पनि सबै नियम संग समसामयिक transplanting र खतना संग अगाडि सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो सक्छ। संयंत्र को मृत्यु को कारण के हो?
छैन withered फर्न गर्न कोठा, नर्सिङ होम सबै नियमहरू पालन गर्नु पर्छ। साथै, grower को फर्न घर वा अपार्टमेन्ट मा वातावरण सही सूचक हो भन्ने तथ्यलाई विचार गर्नु पर्छ। कोठा हावा पनि, सुक्खा गैसीय वा धुवाँ, हरियो सुन्दर सुरु मिलान छ भने। त्यसैले, तपाईं एक फर्न ठूलो adviser हुनेछ छ: आफ्नो मनमा, तपाईं घरमा माहौल स्तर पूरा गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ र यो को कारण खोज्न आवश्यक छ। यो एक ग्याँस लिक हुन सक्छ - ग्याँस उद्योग कल र सबै आदेश छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। शायद भान्सा मा ताजा हावा को कमी - सेट हुड। सायद धेरै हावा पनि सुक्खा, धेरै कम चिस्यान छ - humectant किन्न। फलस्वरूप, तपाईं आफैलाई र सामान्य जीवन, र बिरुवाहरु प्रदान गर्नेछ।
के ठाउँमा छुटकारा?
बढ्न र सामान्य फर्न कोठा विकास गर्न, घरमा ख्याल सही हुनुपर्छ। lodge गर्न बोट कहाँ मा ध्यान लाग्छ। ठूलो परिमाणमा सीधा तर अलिकति छरिएका र छैन हुनत Nephrolepis, छाया सहनु गर्न सक्छन्, तर प्रकाश यो पनि आवश्यक छ। त्यसैले, यो सञ्झ्यालको अगाडि एक कुना राख्न राम्रो छ। यस मामला मा, यो ताजा हावा पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक छ।
यो खातामा बिरुवाहरु को वृद्धि को अर्को सुविधा लिन आवश्यक छ। Nephrolepis, एकदम ठूलो बढ्छ यसको सुन्दर पात हात बढ्न र उकालो। यो आधार मा, खिडकी स्थानहरू मा बस पर्याप्त छैन। पात विन्डो ग्लास र बोट को बिकृति आकार विरुद्ध abut कुरूप हुनेछ।
फर्न लागि जमीन
इन्डोर फर्न लागि आवश्यक माटो के हो पत्ता लगाउन, जंगल मा के जमीन सम्झना गर्न पर्याप्त छ। भूमि त्यहाँ rotted पात वा पाइन सुई पीट को remnants संग, संग, धेरै छाडा छ। त्यो त त्यो घर जस्तै सहज महसुस हुनेछ, Nephrolepis लागि आधार र आवश्यकता हो।
भर्नु गमला कि भूमि फर्न मिश्रण हुनुपर्छ सम्झना उच्च अम्लता, जमीन काठ पाना को वाहेक संग। अब बालुवा र धरण थप्न, माटो निःशुल्क पानी छाडा थियो छ कि निश्चित गर्नुहोस्। को गमला पानी stagnate हुनेछ भने, फर्न जरा तुरुन्तै Rot सुरु, को बिरूवा बिरामी छ। यो को संकेत - पातहरुमा भूरा स्थलहरू। कहिलेकाहीं यो फर्न कोठा languishes कि कारण के हो बुझ्न धेरै गाह्रो छ। सुक्खा पात र खैरो स्पट ढाकिएको, र त्यसपछि, त्यहाँ माटो को एक सुकाउने हुँदा। तपाईं बस स्तर, समय पानी बोट अनुसार सबै गर्न आवश्यक छ, तर यसलाई ज्यादा छैन।
कसरी प्रत्यारोपण गर्न?
इन्डोर फर्न Transplanting हरेक वर्ष बाहिर गर्नुपर्छ। माथि उल्लेख गरिएझैं Nephrolepis - संयंत्र ठूलो छ, यसलाई आफ्नो पट मा भीड रही छ वर्ष को अन्त मा त हो।
को जरा चोट लाग्नु छैन ताकि कसरी, फर्न कोठा प्रत्यारोपण गर्न? जवाफ सरल छ: जरा बिगार्न छैन ताकि यो नयाँ पट मा बित्दै। प्रत्यारोपण बाहिर, एक समयमा बढ्दो सिजन अझै शुरुवात गर्दा प्रारम्भिक वसन्त मा ले सिफारिस गरिएको छ। तपाईंले यो सल्लाह पालन गर्छन् भने र समय मा बोट शरद ऋतु प्रत्यारोपण गर्न, यो लामो समय हो र यो पनि मर्न सक्छ, मूल लिन खराब हुनेछ।
नयाँ गमला तीन एक सेन्टिमिटरले पहिले प्रयोग भन्दा व्यास ठूलो हुनुपर्छ। संयंत्र उचाइ प्राप्त छ, र उहाँले थप आवास आवश्यक भूल छैन। त्यसपछि, धेरै ध्यान दिएर, को जरा पृथ्वीमा मिलाउ छैन रूपमा त, बोट को खड्कुँलासम्बन्धी मा, त्यसपछि तपाईं माटो मिश्रण सबै नियम द्वारा अग्रिम तयार थप्न सक्नुहुन्छ बित्दै। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ यस मामला मा कुनै कठिनाई छ, बस ध्यान सबै गर्न आवश्यक र हतार छैन।
फर्न बुश विभाजन गरेर उर्तानु। तपाईं पक्कै पनि बीउ Nephrolepis (विवाद) बाट बढ्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो practicable छैन। धेरै सजिलो र प्रभावकारी झाडी, को बिरूवा बाधा छैन एक पटक फेरि वसन्त transplanting समयमा उचित बनाउने, विभाजन।
विभाजन को धेरै प्रक्रिया एकदम सरल छ। झाडी गमला देखि stretching, एक आधार विचार गर्नुहोस्। तपाईं त्यहाँ सानो बच्चाहरु-कट्टरपंथी आउटलेट छन् देख्नेछन्। तिनीहरूलाई यहाँ र rhizome एक भाग संग अभिभावक झाडी अलग होसियार हुन। सानो "पिल्ले" बुश अलग पछि फर्न तिनीहरूले steadfastly खाली गर्न सक्छ भनेर, hothouse अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
फेरि एक पटक म सही फर्न कोठा पानी हाले भने अपेक्षित हुन सक्छ को स्मरण गराउन चाहन्छु: सुक्खा पात, को बिरूवा खैरो स्पट ढाकिएको छ, र अन्ततः मर्छ।
हजारी फर्न को मुख्य सिद्धान्त - संयमता! एक गमला मा माटो यो waterlogging अनुमति छैन सुक्खामा हुँदैन अप, यो सधैं अलिकति नम हो भनेर निश्चित। संयंत्र टीन3पटक एक हप्ता सिफारिस गरिएको छ, तर यो एउटा मापदण्ड छैन, सिंचाई समय हावा तापमान र त्यहाँ एक फूल हो जसमा स्थानहरू मा निर्भर गर्दछ। Nephrolepis मात्र बचाव पानी प्राथमिकताको rainwater, यो नरम हुनुपर्छ।
को फर्न ताजा हावा आपूर्ति बिना मर्न सक्छ देखेर, यो यस्तो दुःखी अन्त्य रोक्न उपाय लिन आवश्यक छ। यो गर्न, नियमित उथला फर्न को ब्रश स्प्रे। यस्तो प्रक्रिया हो, अक्सर गर्न आवश्यक छ क्षेत्रमा वातावरण कस्तो प्रबल मा एक आँखा, संग सञ्चालन गर्न। हावा पनि सुक्खा छ भने, त्यसपछि स्प्रे Nephrolepis वातावरण सामान्य छ भने, यो सात दिन भित्र यो दुई वा तीन पटक गर्न सिफारिस गरिएको छ, हरेक दिन आवश्यक छ।
हरियो सुन्दर लागि मल
रोपण फर्न मा माटो सबै आवश्यक additives संग नियम अनुसार तयार भने, यो प्लान्ट आवश्यक छैन खुवाउन अक्सर छ। एक पटक वा दुई पटक एक महिना यसलाई थप खुसी र यसको पात को Saturated र उज्ज्वल हरियो रंग बनाउन शीर्ष लाउने प्रदर्शन गर्न यो Suffice।
यो अन्त गर्न, खनिज मल को समाधान कमजोर स्थिरता। साथै, उपयुक्त जैविक यस्तो जलसेक mullein रूपमा मल,। जैविक प्रयोग गरेर मात्र, तपाईं यो ज्यादा र फर्न overfeed गर्न सक्छन्, यो छैन सहन गर्न सकिन्छ। तयार बनाएको खनिज किन्न सजिलो तरिका पोटाश मल, हरेक फूल पसलमा बेचिन्छ जो। त्यहाँ प्याकेज निर्देशन हो। अनुसार यस फर्न संग वसन्त र गर्मी मा खाद। फलस्वरूप, मायालु grower को प्रयासमा धन्यवाद, Nephrolepis Razlog को हरियो पात को सौन्दर्य कदर हुनेछ!
कसरी घर मा घ्यु प्रोपेगेट गर्न?
आश्चर्य टमाटर: खेती र कटाई
नासपाती सौन्दर्य समारा: विविधता, फोटो, समीक्षा को विवरण
Houseplants हेरचाह: कसरी प्रत्यारोपण गर्न पहाडी
बीउ देखि स्ट्रबेरी कसरी बढ्न
केन्याको गुलाब: वर्णन, वर्ग, फोटो
पुरातन संसारका जनहरूको कलात्मक संस्कृति
ओवन मा चिकन संग पास्ता। व्यञ्जनहरु
माली को मनपर्ने - spirea खैरो। Spirea। हेरविचार विशेषताहरु
सुधार रक्सी र distillate: फरक
"सेतो रातों": कैरेक्टराइजेशन र विश्लेषण Nastya एफएम काम गर्दछ Dostoevsky
निकास धेरै गुना के हो
ह्वेल प्रजाति: तस्बिर को सूची। Toothed ह्वेल: प्रकार
के जेली जई बनाइएका लागू
Ravensbruck: एकाग्रता शिविर महिला
आवेदन र समीक्षा: "नियो-Penotran"